Fizahan-tany sinoa: valanaretina Coronavirus any Sina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fizahan-tany sinoa: valanaretina Coronavirus any Sina
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana China • fanabeazana • Safety • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Androany ny 24 Janoary 2020, izay ny Chúxì (除夕), andro farany amin'ny taonan'ny Pig Earth sy ny Taom-baovao ho an'ny taom-baovao Rat Rat, manomboka fihodinana vaovao ho voalohany amin'ny roa ambin'ny folo taona amin'ny kalandrie Zodiac sinoa .
Ity dia tokony ho andro fankalazana ary antenaina mandritra ny herinandro fifaliana amin'ny sakafo sy fialamboly ary fiaraha-miaina ho an'ny fianakaviana an-jatony tapitrisa ao Shina.
Fa kosa, fipoahan'ny Coronavirus vaovao dia niteraka ahiahy, fanafoanana ny fankalazana ofisialy, fanidiana ny fisarihana toa ny Forbidden City na Shanghai Disneyland ary ny fanidiana ny tanàna 30 tapitrisa mahery ao amin'ny faritanin'i Hubei.
Ny herinandro ho avy dia tokony hahita indray ny fifindra-monina isan-taona lehibe indrindra eran'izao tontolo izao miaraka amin'ireo dia 400 tapitrisa ao Shina ary dia misy dia lavitra fito tapitrisa.
Inona no ho vokany vetivety amin'ny valanaretina Coronavirus?
Hahena be ny dia an-trano, satria olom-pirenena sinoa maro no tsy hivory olona marobe, anisan'izany ny mitondra lamasinina na fiaramanidina. Mbola hisy vahoaka marobe mitsangantsangana ao anatin'izany ireo mpiasa marobe avy any ambanivohitra miasa any amin'ireo tanàn-dehibe, izay tsy hitsahatra amin'ny fitsidihana ny zanany sy ny ray aman-dreniny ao an-tanànany. Betsaka amin'izy ireo no efa nanao ny diany nody ary tsy maintsy hiverina hiasa amin'ny faran'ny Herinandron'ny Fetin'ny lohataona.
Ireo dia lavitra dia tsy hisy vokany firy amin'izany. Mazava ho azy fa tsy afaka mivezivezy ny olom-pirenena amin'ireo tanàna voaharo karama, fa ho an'ny rehetra mandao ny firenena dia toa hevitra tsara. Mety hojerena tsara kokoa ireo mpanelanelana amin'ny fifindra-monina eran'izao tontolo izao, saingy hanana voka-dratsy ambany kokoa.
Inona no ho vokany maharitra amin'ny valanaretina Coronavirus?
Raha heverina fa ny hetsika hentitra ataon'ny governemanta sinoa dia hanampy amin'ny fifehezana ny viriosy ary tsy hisy ny areti-mandringana, ny indostrian'ny fizahantany, ny fitaterana ary ny fampiantranoana dia tsy maintsy hanaiky ny fahaverezan'ny vanim-potoana fitsangatsanganana iray lehibe, saingy ho sitrana ao anatin'ny fotoana fohy vanim-potoana. Ny sasany amin'ireo dia tsy noraisina tamin'ity vanim-potoana Fetin'ny Lohataona ity dia hahemotra fotsiny fa tsy foanana.
Miorina indray amin'ny fiheverana fa tsy hisy ny areti-mandringana, ny fatiantoka mety ho antsasaky ny isan-jato na iray isanjaton'ny fitomboan'ny harinkarena faobe Shina amin'ny taona 2020 dia tsy hampihena ny isan'ny dia lavitra amin'ny alàlan'ny fomba lehibe, satria ny Top 10 amin'ny mponina sinoa manan-karena ampy hivezivezy dia mbola afaka miantehitra amin'ny haren'izy ireo nangonina tao anatin'ny folo taona lasa mba handoavana ny dia any ivelany. Ankoatr'izay, Sinoa maro no tsy mandeha amin'ny fialam-boly, fa noho ny antony ara-barotra, fanabeazana, fahasalamana na ara-pinoana ary koa ny fitsidihana namana sy havana.
Koa anio dia mirary faran'ny taona vaovao ho an'ny rehetra ny olona ao anatiny sy ivelan'i Shina fa tsy amin'ny Fetin'ny Taom-baovao hafa.
Visit Eto hamaky vaovao bebe kokoa momba an'i Sina.